Inkubation Egipt Chicken | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Inkubation Egipt Chicken
Mando tsy misy renirano: fampidirana ny atody henry
Zavamaniry maro be, izay nandritra ny fotoana lava be dia nisafidy ny safidy tsara, indrisy fa saika very tanteraka ny fisehoana amin'ny fitaoman-janaka. Na dia eo aza izany, dia alevina any amin'ny toeram-pambolena sy ny tokantrano ny akoho tanora. Azo atao izany noho ny fambolena vorona, izay miteraka ny akoho tsy misy akoho.
Fomba entina mametraka atody ao anaty tabataba
Miaraka amin'ny fampidiran-trano iray dia afaka mahazo marary salan'isa tsara. Saingy misy vokatra manan-danja mahakasika ny isan'ny ampongabendanitra sy ny sisa tavela aminy dia ny fametrahana ny atody marina ao amin'ny "henan-kafe". Zava-dehibe ihany koa ny misafidy fitaovana fampidiran-tsakafo tsara, ary koa ny fandinihana ny firoborobon'ny tsirairay amin'ny karazana karazana manokana.
Raha manapa-kevitra ny hamboly sy hamboly akoho ianao, na ho ela na ho haingana, dia tsy maintsy miaina mandritra ny fotoana fohy. Ankehitriny, na dia any amin'ny toeram-pambolena madinika aza, ampiasaina amin'ny fandrobana ny vorona, ny fampidiran-tsofina dia ampiasaina, satria ny tsy fitovian'ny taratra ao aminy dia avo lenta, ary ny loharanom-pambolena dia kely. Amin'io dingana io dia mety hisy fanontaniana be dia be momba ny vanin-taolana sy ny fizotrany, ny ilana hanampiana ny lavaka fantsakana sy ireo lohahevitra manan-danja hafa.
Nahoana no tsy nipoitra ireo akoho tao amin'ilay ratra?
Tsy voatery hanamboatra ny akoho ny ankizivavy. Ny mpitrandraka, izay novokarina tamin'ny fitaovana maoderina, dia natao hanatsorana sy hampihenana ny dingana fampidirana, ary ny safidy malalaka sy ny kalitaon'ny modely dia afaka manome antoka ny fahombiazan'ity ezaka ity. Saingy, indrisy fa ny fikolokoloana dia matetika mitaredretra sy sarotra na tsy mitranga mihitsy, ary misy antony marobe amin'izany.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Inkubation Egipt Chicken